China 1.5 self drilling Screw mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
Iplate yokuVala i-Multi-axial Distal Femur
I-Multi-axial Neck yeHumerus yokuCoca iPlate
.08.0 Series Fixation yangaphandle Fixator - Proxim ...
maxillofacial trauma mini arc ipleyiti
ipleyiti yomgangatho we-anatomical orbital
1.5 self kusombiwa Screw
i-anatomical titanium mesh-2D umngxunya wokujikeleza
Ukubuyiselwa kwe-Neurosurgery kunye nokwakha ngokutsha, ukulungisa iziphene ze-cranial, ukunceda ukwakha ngokutsha iimfuno eziphakathi okanye ezinkulu zekranium, ukulungisa isikrufu ngeplate yethambo.
Izinto: ingxubevange titanium ingxubevange
• amazwe titanium ingxubevange ukufezekisa eyona lukhuni kunye bhetyebhetye ngokupheleleyo
• I-Switzerland TONRNOS CNC yokusika ngokuzenzekelayo
• Inkqubo ye-oxidation eyahlukileyo, ukuphucula ubulukhuni bomhlaba kunye nokunxiba
umnqamlezo intloko Screw umqhubi: SW0.5 * 2.8 * 75mm
isibambo sokudibanisa ngokukhawuleza
Amacwecwe aphantsi eeprofayili ezisezantsi kunye neeplati ezibanzi zinikezela phantse ukuba akukho kubambeka. Ifumaneka kubude obumiselweyo ngakumbi.
Izinto eziluncedo ze-screw titanium alloy:
1. Amandla aphezulu. Ubuninzi be-titanium yi-4.51g / cm³, ephezulu kune-aluminium kwaye isezantsi kunesinyithi, ubhedu kunye ne-nickel, kodwa amandla aphezulu kakhulu kunalawo ezinye izinyithi. Isikulufu esenziwe nge-alloy titanium alloy kwaye somelele.
2. Ukuxhathisa umhlwa, i-titanium kunye ne-titanium alloy kwimidiya emininzi izinzile kakhulu, izikrufu ze-titanium alloy zinokusetyenziswa kwindalo enobungozi.
3.Ukuchasana nobushushu obuhle kunye nobushushu obuphantsi ukumelana nobushushu.Izikulufu ze-Titanium zingasebenza kumaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-600 ° C kunye no-250 ° C, kwaye inokugcina imilo yazo ngaphandle kokutshintsha.
I-Titanium yintsimbi engenamandla kwaye ayizukubekwa kumazibuthe kumazibuthe aphezulu kakhulu. Ayisiyityhefu kuphela, kwaye iyahambelana kakuhle nomzimba womntu.
5.Ukusebenza okunamandla kokulwa nokudambisa.Ukuthelekiswa nentsimbi kunye nobhedu, i-titanium inexesha elide lokuthintela ukungcangcazela emva kokungcangcazela komatshini kunye nokushukuma kombane.Le ntsebenzo inokusetyenziswa njengeefolokhwe zokulungisa, izinto zokungcangcazela zezinto zokugaya ze-ultrasonic kunye neefilimu zentshukumo zezandisi-lizwi eziphambili. .
Uyilo lomsonto wesiqalo esikhawulezileyo sokuqalisa kunye ne-torque yokufaka esezantsi. Ukukhethwa okubanzi kwamacwecwe kunye nomnatha, kubandakanya i-mastoid kunye ne-meshes yethutyana, kunye ne-burr hole cover for shunts.
Ukuqina kwesikrufu, kungcono?
Izikrufu ziqhele ukusetyenziswa kuqhaqho lwamathambo ukunyanzela indawo ephukileyo, ukulungisa ipleyiti kwithambo, nokulungisa ithambo kwisakhelo sokulungisa sangaphakathi okanye sangaphandle. Uxinzelelo olusetyenzisiweyo ukucofa isikrufu kwithambo lilingana ne-torque esetyenziswe Ugqirha.
Nangona kunjalo, njengoko amandla e-torque esonyuka, i-screw ifumana amandla aphezulu e-torque (Tmax), apho amandla okubamba amandla kwithambo ancitshisiwe kwaye ikhutshelwa kude umgama omncinci. ukujija isikrufu ngaphandle kwethambo. Ihlala isetyenziswa njengeparameter yokulinganisa ukubamba kwesikrufu Okwangoku, ubudlelwane phakathi kweyona torque iphezulu kunye namandla okutsala ayaziwa.
Ngokwezonyango, oogqirha bamathambo bahlala befaka iscrew malunga ne-86% yeTmax, nangona kunjalo, uCleek et al. ifumanise ukuba ukufakwa kwesikere kwe-70% ye-Tmax kwi-tibia yeegusha kunokufikelela kwi-POS ephezulu, ebonisa ukuba amandla e-torsion agqithisileyo anokusetyenziswa ekliniki, anokunciphisa ukuzinza kokuqina.
Uphononongo lwamva nje lwehumerus kwii-cadavers zabantu nguTankard et al. I-POS ephezulu ifunyenwe kwi-50% ye-Tmax Izizathu eziphambili zokungafani kwezi ziphumo zingentla zingangqinelani kwemizekelo esetyenzisiweyo kunye nemigangatho yemilinganiselo eyahlukeneyo.
Ke ngoko, uKyle M.Rose et al. Ukusuka e-United States kulinganiswe ubudlelwane phakathi kwe-Tmax ne-POS ezahlukeneyo ngezikhonkwane ezifakwe kwi-tibia ye-cadavers yabantu, kwaye yahlalutya ubudlelwane phakathi kwe-Tmax kunye ne-BMD kunye ne-cortical bone thickness. ubuninzi kunye ne-POS efanayo inokufumaneka kwi-70% kunye ne-90% yeTmax ene-torque yesikrufu, kunye ne-POS ye-90% ye-Tmax ye-torque ye-screw enkulu kakhulu kune-100% ye-Tmax. Kwakungekho mahluko kwi-BMD kunye ne-cortical thickness phakathi kwamaqela e-tibia, kwaye kwakungekho lungelelwaniso phakathi kwe-Tmax nala mabini angentla. ngaphantsi kweTmax. Nangona i-70% kunye ne-90% ye-Tmax inokufezekisa i-POS efanayo, kusekho izibonelelo ezithile zokuqaqambisa isikere, kodwa torque mayingagqithi kwi-90%, kungenjalo umphumo wokulungiswa uya kuchaphazeleka.
Umthombo: Ubudlelwane phakathi kwe-Insertional Torque kunye nePullout Strength ye-Screws Screws. Iindlela zobugcisa kwi-Orthopedics: ngoJuni 2016-Umqulu 31-Ukukhutshwa kwe-2-p 137-139.
Egqithileyo i-anatomical titanium mesh-3D imilo yeentyatyambo
Okulandelayo: Isikali sokuzibamba esingu-2.0
Ixabiso lokujija ixabiso lakho
Isixhobo sokuzibamba seTitanium
I-orthognathic 0.6 L ipleyiti emi-6 imingxunya
maxillofacial trauma mini anatomical hook ipleyiti
Ukutshixa ipleyiti encinci ye-T
Ukutshixa ipleyiti yebhulorho encinci ethe tyaba
i-orthodontic ligation nail 2.0 yokuzingca ...
Idilesi:Isakhiwo saseShuangyang, Idolophu yaseYangshe, isiXeko saseZhangjiagang, kwiPhondo laseJiangsu, China